Imidlalo eyisikhombisa yebhodi ehamba phambili yefoni noma ithebhulethi | Izindaba zamagajethi
Imidlalo eyisikhombisa yebhodi ehamba phambili yefoni noma ithebhulethi
UJordi Gimenez | | Aplicaciones
Lapho sichitha amahora amaningi sivalelwe ekhaya futhi singasazi ukuthi yiluphi uchungechunge, ifilimu noma ividiyo ye-YouTube okufanele siyibuke, sinezinye izinketho eziningi ezitholakalayo esivame ukungazinaki. Ngokunengqondo kulokhu isikhathi sokuboshwa Imibono yokuzivocavoca umzimba, izincwadi okufanele uzifunde, imidlalo yebhodi, ukufunda izilimi, ukwenza uhlobo oluthile lwezifundo eziku-inthanethi, ikhonsoli neminye imisebenzi iyathakazelisa ngempela ukusebenzisa kangcono isikhathi sakho futhi uma unabancane ekhaya ungahlala wenza zonke izinhlobo ubuciko noma imisebenzi ekuphazamisayo kancane futhi udlulise isikhathi ngokushesha.
Kulokhu esizokukhombisa kona yimidlalo eyisikhombisa ehamba phambili ongayidlala ngefoni noma ithebhulethi yakho ukuze uma ungenayo umdlalo webhodi wasebukhosini ungayisebenzisa noma kunjalo.
Impela abangaphezu koyedwa kini bayayazi le midlalo esizoyikhombisa kule ndatshana kodwa iningi lenu aliyazi, ngakho-ke kuhlale kujabulisa ukuwabelana nani nonke ukuze nikwazi ukujabulela le midlalo yebhodi yize ningenayo ngokomzimba ekhaya. Ngethebhulethi noma ngomakhalekhukhwini singadlala amahora amaningi nabo, ngakho-ke ake sibheke lezi zinketho. Kunezinketho eziningi komunye wemidlalo futhi ungakhetha phakathi kwale oyithandayo kakhulu, siphakamisa wena bese ukhetha.
5 Umdlalo wehansi
6 Cwilisa iflothi
7 I-Pictionari ne-Pictionary Air
Ngaphandle kokungabaza omunye wemidlalo yezinkanyezi ukuzivocavoca ingqondo yethu futhi ube nesikhathi esihle sokudlala. I-Chess ingumdlalo wokuqala webhodi lomakadebona esizokwabelana nawe futhi unakho kokubili ithuba lokudlala ku-iOS, iPadOS, naku-Android. Lapha ngezansi sishiya isixhumanisi sokulanda salo mdlalo esitholakalayo ngokuphelele free.
Umthuthukisi: I-AI Factory limited
Lona ngomunye wemidlalo yasenganekwaneni lapho ibhodi lingumnikazi wetafula. Kulokhu umdlalo udluliselwa kumadivayisi wethu weselula futhi singachitha amahora sidlala sizama ukuqagela amagama nokuba nesikhathi esimnandi impela kumnandi nomndeni.
Asikwazi ukukhohlwa enye yamakhosi emidlalo yebhodi njalo, isikhumba. Kulokhu sinezinketho eziningana ezitholakala ezitolo zohlelo lokusebenza kepha sakhetha lezi ezimbili, zombili amadivayisi we-iOS ne-Android. Khetha eyodwa oyithanda kakhulu ngoba lapha kunezinguqulo ezithile ze-iPad.
Umthuthukisi: Amabhuzu we-Gameberry
Ngeke ilahleke emabhaleni esikhathi sokuphila konke, iDomino imvamisa iyinkosi yamatafula futhi kulokhu sizoyidlulisela kumadivayisi wethu we-iPhone, i-iPad noma we-Android. Umdlalo umnandi ngempela futhi ungaba nesikhathi esihle sokudlala ngawo. Ukulinganiselwa lapha kukhulu kakhulu ngoba ayikho inketho yokudlala wonke umndeni ngasikhathi sinye, kepha hheyi, kumnandi kakhulu futhi ngeke kulahleke kulolu hlu lwe imidlalo yama-veteran board.
Umthuthukisi: Imidlalo ye-Loop
Okunye okungalahleki ohlwini lwemidlalo yebhodi yakudala ngumdlalo weLa Oca. Yebo, kuleli cala kufika abadlali abane abangadlala futhi inenguqulo eku-inthanethi ukuze ukwazi ukudlala nabanye abantu kepha ubumnandi bukhona dlala nalabo abasekhaya.
Qaphela ukuthi kulokhu umdlalo awukhululekile, okokuqala. Kepha kufanele ukuthi lo mdlalo ungasinika ubumnandi obengeziwe. Lo mdlalo uhlobo olusemthethweni lomdlalo webhodi wakudala kaHasbro kusuka izimpi zasolwandle Futhi yize kungemahhala, ngumdlalo omnandi ongawusebenzisa kumafoni wethu, ngezindlela eziningi ezithakazelisayo nemidwebo.
Umthuthukisi: I-Marmalade Game Studio
Kulokhu sifaka umdlalo we-Naval Battle, okuyi- mahhala ku-Google Play Isitolo ye-Android:
I-Naval Battle Cwilisa iFleet
Umthuthukisi: smuttlewerk ezisebenzayo
I-Pictionari ne-Pictionary Air
Ekugcineni, iPictionari yasenganekwaneni ayinakushoda etafuleni lethu lomdlalo. Lo mdlalo, otholakala ezinhlotsheni ezahlukahlukene zamadivayisi eselula, umnandi impela kepha kusobala ukuthi unemikhawulo yawo uma uqhathaniswa nomdlalo webhodi wokuqala. Siyabona ukuthi kunezinguqulo eziningana futhi kulokhu sengeze uhlobo lwePictionari nePictionary Air for I-Android kanye namadivayisi we-iOS ngokulandelana.
Umthuthukisi: UFerreiro Adrian
Kweminingi yale midlalo kufanele sicacise ukuthi yini esingayenza imidlalo eku-inthanethi nabangani bethu noma nabanye abasebenzisi, lokhu kuzoya ngomdlalo futhi uma sifuna noma cha. Kunoma ikuphi, inketho iyatholakala kwabaningi babo ukuze ukwazi ukukhetha ukuthi uzodlala noma cha ngokubonga ku-inthanethi ngezinketho zabo. Kuneminye imidlalo eminingi yebhodi edluliselwe kuzingxenyekazi zedijithali kepha okwamanje siyadlula kule eyisikhombisa, uma bekholisa kamuva sizokwenza enye iqoqo ngemidlalo efanayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Aplicaciones » Imidlalo eyisikhombisa yebhodi ehamba phambili yefoni noma ithebhulethi
Ungayizama kanjani iGoogle Stadia Pro mahhala izinyanga ezimbili
Ukubuyekezwa kwe-Yi 1080p Home Camera